Isihloko liyakhuluma ngokuphela yini ukufingqa, yingakho kukhona inqubo ephathekako, futhi lapho kungabonwa ekuphileni kwansuku zonke.
Physics ingenye isiyalo ebaluleke kakhulu kunazo zonke esintwini. Yiqiniso, ibhekisele ukuba isayensi "yayo" yanoma yiziphi nomlandeli wayo, kodwa nokho kuba physics, kanye nabanye yemvelo wesayensi lobuchwepheshe avunyelwe kancane, kodwa ukuqonda isakhiwo zezwe lethu. Ngazo zonke izikhathi, lapho nababethi unganelisekile incazelo kweBhayibheli yonke futhi nemvelo jikelele, futhi, ukuba amaphayona, bezama ukuqonda isimo bebodwa, njengoba, ngokwesibonelo, lapho Mikhail Lomonosov.
Ngeshwa, ne popularization physics akunjalo elula, kodwa abanye kuyaqhubeka kuba, uma ukhumbula "Physics okujabulisayo" Perelman kanye nenombolo ye imisebenzi yesayensi, uStephen Hawking.
Futhi physics Kuyathakazelisa ngoba asizombelezileko zonke okuningi yesibili kwenzekani, thina asetshenziselwa futhi bamshaya indiva, futhi abasakwazi ezithakazelisayo kusukela Ngokombono ongokwesayensi, isibonelo, lo mkhuba ukufingqa. Ngakho-ke yini ukufingqa? Kulesi siyowuqonda.
Uma siphendukela encyclopedia, ngokusho kwakhe, i-ukufingqa - kuyinto ukwedlulela into kusuka gaseous ukuba uketshezi noma okuqinile. Ngamafuphi, le nqubo ukuguqulwa umusi ku okunye, isibonelo, uketshezi. Uma uthi nhlá, konke ulula, sonke abajwayele yokuthi igumbi umusi kancane kancane ukugqashuka ngesimo amanzi amaconsi ku izinto, futhi kuba njalo. Ngakho manje siyazi ukuthi kuyinto ukufingqa. Nokho, ngisho nalapho into enjalo kwenzeka, nokuthi ziwusizo?
Ukukhuluma ngale mkhuba ngokomzimba, umuntu akakwazi bayakhohlwa imvula. Phela, sibonga khona namanzi Emhlabeni wonke ukuphila kwazivelela. Futhi akukho umjikelezo ezingabalulekile kakhulu nemvelo. Ngokwesibonelo, emanzini ku Venus kakhulu, kodwa-ke ngeshwa, kuphela ngesimo umusi, okuyinto ayifiki surface ashisayo kanye iplanethi ofukamela fu ezibangela imiphumela yokushisa okubangelwa amagesi futhi ukwandisa izinga lokushisa nakakhulu.
Ngenhlanhla, esimweni iplanethi yethu, konkhe kwehlukile: siba evamile umjikelezo wamanzi, ngenxa kuyo ngokuvumelana ibhalansi. Ngakho-ke yini ukufingqa, futhi imvula lapho?
Eqinisweni, yonke into ilula ngokwanele ukukhumbula Yiqiniso esikoleni yomlando zemvelo. amanzi Liquid kancane kancane ayahwamuka ebusweni, bese liphuma ngesimo umusi. Futhi lapha kufika fun okuyingxenye: ayanda, ephansi izinga lokushisa, futhi umusi efudumele kancane ayaphola phansi, ukubuyela esimweni saso sokuqala - amanzi. Futhi ke lokhu amanzi njengoba imvula elachithwa emuva emhlabeni shabalala, bese uphinda umjikelezo. Ngakho manje siyazi ukuthi kuyinto ukufingqa physics. Kodwa lapho le nqubo kungabonakala nasemkhakheni ekuphileni kwansuku zonke manje?
Ngenkathi ezibandayo kungabonwa ku ingaphakathi amafasitela umswakama - liphinde isibonelo ukufingqa. Kukhona efanayo, ngokuvamile ngenxa yezinguquko lokushisa ngaphandle ngaphakathi esakhiweni futhi ngenxa umswakama ngokweqile. By the way, yingenxa lokhu ebusika phezu amafasitelana iwindi kungabonwa frost.
I ukufingqa lingabonakala futhi lapho ukupheka, umusi avuke ebhodweni elinamanzi abilayo futhi luhlala ezindongeni nofana izinto ngamaconsi amancane liquid. Futhi, le nqubo kusobala kakhulu kubonakala okugeza sauna: uma uthele amanzi seziko eliphezu ashisayo, iya isimo gaseous futhi okungenani iconsi lokushisa iqala uphenduke phezu izindonga floor.
Ngakho manje siyazi ukuthi ukuhwamuka futhi ukufingqa. By the way, ngokuvumelana nomthetho ukulondolozwa izinto namandla esimweni liquid ingena umusi kakhulu ngendlela futhi ayahwamuka.
Izimbali Hyacinth: indlela yokutshala ikhaya
Ukucinana kwemigudu yomoya emaphashini ubovu: incazelo, izimbangela, izinhlobo nezilinganiso